China Abakhiqizi Bamafutha nabaphakeli | Xuanyi
Izinzuzo zobuchwepheshe bokubeletha okunomhlwenga Kusetshenziswa i-porosity yomzimba osikiwe, kungamanziswa ngo-10% ~ 40% (ivolumu ingxenyenamba) kawoyela wokuthambisa, ongasetshenziswa ngaphansi kwesimo sokutholakala kukawoyela. Ngokuthuthuka okuqhubekayo kukawoyela- izimboni ezithwalayo, izimboni ezanda ngokwengeziwe namabhizinisi asebenzise ukuthwala uwoyela, futhi inani elikhulu lamabhizinisi selijoyine imboni ethwala uwoyela.
Inezici zezindleko eziphansi, ukumuncwa kokudlidliza, umsindo ophansi, futhi asikho isidingo sokwengeza uwoyela wokuthambisa emahoreni amade okusebenza. Ilungele ikakhulukazi indawo yokusebenza okungelula ukuthi ithanjiswe noma ingavunyelwa ukuthi ingcoliswe ngamafutha.Ukuthethelela yipharamitha ebalulekile yokuthwala uwoyela.Ukuthwala uwoyela kusebenza ngejubane elikhulu nomthwalo omncane kudinga okuqukethwe okuphezulu kwamafutha ne-porosity ephezulu Ukuthwala amafutha kusebenza ngejubane eliphansi nangaphansi komthwalo omkhulu kudinga amandla aphezulu kanye ne-porosity ephansi.Lolu hlobo lokuthwala lwasungulwa ekuqaleni kwekhulu lama-20. Ngenxa yezindleko zayo zokukhiqiza eziphansi nokusetshenziswa okulula, isetshenziswe kabanzi. Isibe yingxenye ebaluleke kakhulu ekusetshenzisweni kwemikhiqizo ehlukahlukene yezimboni njengezimoto, izinto zasendlini, okokusebenza kokulalelwayo, okokusebenza kwehhovisi, imishini yezolimo nokunemba kwemishini.Ukuthwala u-Oily kuhlukaniswe kwaba isisekelo sethusi, isisekelo sensimbi, isisekelo sensimbi yethusi, njll.
Kusetshenziswa izici eziwumbala zento noma izici zokusondelana zamafutha okugcoba, ngaphambi kokufakwa nokusetshenziswa kwesihlahla esithweleyo, uwoyela othanjiswayo ungafakwa ungene ezintweni eziqukethe isihlahla, futhi ukuthwala kungenziwa ngaphandle noma ngaphandle kokugcoba uwoyela isikhathi eside ngesikhathi sokusebenza. Lolu hlobo lokuthwala lubizwa ngokuthwala uwoyela.Oily bearing in non-operating state, the lubricating oil is full of its pores, running, shaft rotation because of friction and heat, bearing bush bush thermal to fokotsa the pores, so that lapho uwoyela eyeka ukuzungeza, amahlathi apholayo ayaphola, ama-pores ayabuyiselwa, futhi uwoyela othambisayo ubuyiselwa kuma-pores.
Yize kungenzeka ukuthi othwala uwoyela enze ifilimu ephelele kawoyela, ezikhathini eziningi, lolu hlobo lokuthwala lusesimweni esixubene sokungqubuzana sefilimu kawoyela engaphelele. Izinto zokwakhiwa kwamafutha ezihlahleni ezingasebenzisa izakhiwo eziwumbala zento ukwenza uwoyela wokugcoba ogcwele ama-pores yilezi: ukhuni, insimbi ekhulayo yensimbi, i-cast alloy alloy kanye ne-powder metallurgy antifriction materials; Ubumbano phakathi kwento namafutha okuthambisa lungasetshenziswa ukwenza uwoyela wokuthambisa uhlakazeke ngokulinganayo kulokho okubhaliwe. Iningi lezinto ezithwala uwoyela ngama-polymers, njenge-resin ethwala uwoyela. Isimiso sokusebenza senqubo kawoyela.
Langaphambilini Umthuki Wokushaqeka
Olandelayo: Amandla Ithuluzi nokufaka